तार अशुद्ध द्वारा एक्क्समक्स फ्लाई
प्रश्न तार अशुद्ध द्वारा एक्क्समक्स फ्लाई
8 महिना3दिन पहिले #1229 by mikmcc
HI i; ove rikoooo downloads। मेरो 320 संग, एक उडान पछि, जब म एक नयाँ उडान शुरू गर्छु, तल्लो दायाँमा प्रदर्शन जुन सन्देशहरू देखाउँछ, भन्नाले सामान्य निवारण विधिको आधारमा फ्लाटलाई नियन्त्रण गर्दैन। कुनै नियन्त्रण मोडमा, म मेरो लिटर नियन्त्रणमा लान्न सक्दिन। म यसलाई कसरि सामान्य सीधा कानून मा फिर्ता प्राप्त गर्न को लागी फेरि एक र 320 लोड गरेर fsx लोड?
8 महिना2दिन पहिले #1231 by mikmcc
कुनै सहयोग छैन? धन्यवाद गिरोहहरु
8 महिना 1 दिन अघि #1233 by ninjaboy12377
IDK यदि कसैलाई यो देख्नेछ तर थिच्नुहोस् (Ctrl + E) थिच्नुहोस् र यदि हेराइ प्यानलबाट दायाँतिर दाँयामा काम गर्नुहुन्न भने मलाई विश्वास छ कि "तार प्रत्यक्ष नियम द्वारा फ्लाई" प्राप्त गर्न तपाईं फ्लाईमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। यसले मलाई मद्दत गर्यो
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: mikmcc
8 महिना 1 दिन अघि #1234 by mikmcc
धन्यवाद निंजा। म ती प्रयास गर्नेछु
8 महिना 1 दिन अघि #1235 by mikmcc
निन्जा, CTRL + E काम गरेन, तर माथिल्लो हेराइले माथिल्लो दायाँतिर उडान नियम नियन्त्रण गर्न प्यानलको साथ काम गरेको जस्तो लाग्यो। सहयोगको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।